I-OneSignal: Yongeza i-Push Izaziso ngeDesktop, i-App, okanye i-imeyile | Martech Zone
Nyanga nganye, ndiza kufumana amawaka ambalwa eendwendwe ezibuyayo ngezikhangeli zesaziso sokudibanisa. Ngelishwa, iqonga esilikhethileyo ngoku liyavalwa kwaye kuye kwafuneka ndifumane entsha. Okubi nangakumbi, akukho ndlela yokungenisa abo babhalisi bakudala babuyela kwindawo yethu ukuze sizokubamba. Ngenxa yeso sizathu, kwafuneka ndikhethe iqonga elaziwayo nelibi. Kwaye ndiyifumene OneSignal.
Ayisiyenzi kwaphela OneSignal yenza izaziso zokutyhala kwizikhangeli, zikwayivenkile yokumisa enye yezaziso zokutyhala ngokusebenzisa usetyenziso lweselfowuni okanye nge-imeyile ngokunjalo.
Yintoni iSaziso sokuTsala?
Uninzi lwentengiso yedijithali luyayisebenzisa Tsala ubuchwepheshe, ngumsebenzisi owenza isicelo kwaye inkqubo iphendula ngomyalezo oceliweyo. Umzekelo unokuba liphepha lokufika apho umsebenzisi acela ukhuphelo. Nje ukuba umsebenzisi angenise ifom, i-imeyile ithunyelwa kubo enekhonkco lokukhuphela. Oku kuluncedo, kodwa kufuna isenzo sethemba. Izaziso zokutyhala yindlela esekwe kwimvume apho umthengisi eqala khona ukwenza isicelo.
Nayi imizekelo embalwa yezaziso zoTsalo:
Desktop Push Izaziso - iibrawuza zangoku zibonelela ngethuba push isaziso. Kule ndawo, umzekelo, undwendwe lokuqala lubuzwa ukuba singabathumela isaziso sokutyhala. Ukuba bayavuma, ke ngalo lonke ixesha sipapasha iposti entsha bafumana isaziso sedesktop.
Isicelo sesaziso sePush Push -Izicelo zeselfowuni zinokwazisa abasebenzisi beselfowuni ngesaziso sokutyhala. Enye usetyenziso lweselfowuni ndiyakonwabela ukuyisebenzisa Zima, kuba ifunda ikhalenda yam kwaye indazisa- ngokusekwe kwitrafikhi- xa ndifuna ukuhamba ukuze ndifike kwintlanganiso yam kwangexesha.
I-imeyile ekhutshelweyo yokuTsala izaziso -Ukuba u-odola kwi-Apple, ufumana izaziso ze-imeyile ezikwazisa ukuba i-odolo yakho ipakishwe nini naxa isendleleni eya apho iya khona.
I-OneSignal inikezela ngeempawu ezintle ngaphandle kweqonga lomnqamlezo kunye nexabiso elinoburharha:
Ukuseta iMizuzu eli-15 Ubungqina babathengi abakholelwa ukuba kwakulula kangakanani ukuqala.
UkuKhangelwa kweXesha langempela Jonga ukuguqulwa kwezaziso zakho kunye nee-imeyile ngexesha lokwenyani.
Ukuhlaziywa - Izigidi zabasebenzisi? Sizigubungele zonke. Sixhasa uninzi lwezixhobo kunye nazo zonke ii-SDK eziphambili.
Imiyalezo yovavanyo lwe-A / B -Thumela imiyalezo emibini yovavanyo kwiseti esezantsi yabasebenzisi, emva koko uthumele owona ulungileyo kwabanye.
Ukwahlulahlula ekujoliswe kuko -Yila izaziso ezizezakho kunye nee-imeyile, kwaye uzise kumsebenzisi ngamnye ngexesha elifanelekileyo losuku.
Ukuhanjiswa okuzenzekelayo - Cwangcisa uze ulibale. Thumela ngokuzenzekelayo izaziso ezifanelekileyo kubasebenzisi.
Ukongeza kwi-API eyomeleleyo, Plugin WordPress, kunye neekhithi zophuhliso lwesoftware (ii-SDKs) ukudibanisa ngokulula, i-OneSignal ibonelela ngomsebenzisi omkhulu kubathengisi ukuba bathumele ezabo izaziso zokutyhala. Banikezela ngokuhlanganiswa kwebhokisi kunye ne-SquareSpace, iJoomla, iBlogger, iDrupal, i-Weebly, iWix, iMagento, kunye ne-Shopify.
Bhalisela simahla kwi-OneSignal
tags: uvavanyo lokutyhala izazisozeblogaIsazisi sesikhangeliiqonga lomnqamlezo lokutyhala izazisoisaziso sedesktopdrupalJoomlaMagentousetyenziso lweselfowuniiziko lokwazisangokuzenzekelayotyhala apiIsaziso sokutyhalaIsaziso sokutyhala apiIsaziso sokudibanisa iplagiUkulandela umkhondo kwenyani yexesha lokwenyaniisaziso se-safariizaziso zokutyhala ezothusayoicandelo lokutyhala izazisothengasquaeveracei-imeyile ebangelaisaziso sewebhuewebhuwixiplagi yamagama
I-People.ai: Vula amandla obuGcisa boBugcisa kwiiNtengiso zakho, ukuThengisa, kunye namaQela eeMpumelelo zabaThengi